काठमाडौँ । बाँकेको गुर्देनगौरीदेखि बर्दियाको कर्णाली नदीसम्म नेपाल–भारत छुट्याउने ५५२ सीमास्तम्भ कायम गरिएका छन् । त्यसमा मुख्य, सहायक र साना छन् । ती सबै सीमास्तम्भ जहाँ गाडिएको थियो, त्यहाँ नभएको अवस्था छ । बर्दियामा त झन् ...
दुई दशक पुरानो योजना अझै शुरु भएन
काठमाडौँ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ३ को एकलैनीबजार क्षेत्रको सडक विस्तार योजना अघि बढ्न सकेको छैन । दुई दशक पुरानो एकलैनी विस्तार योजना कहिले बजेट अभाव तथा कहिले स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । राज्य...
सुगम जिल्लाभित्रको पीडा, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव राप्तीपारि
कार्तिक १७, २०७६, आइतबार
काठमाडौँ । बाँके सुगम जिल्लाका रुपमा चिनिन्छ तर, धेरैलाई थाहा छैन सुगम जिल्लाभित्रको पीडा । यस जिल्लाका कतिपय दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र अहिले पनि अभावसँग जुझिरहेका छन् । सबै हिसाबले सुगम मानिने बाँकेभित्रकै राप्तीपारि बघौडाको कथ...
काठमाडौं । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले मुलुकको समृद्धिका लागि सामाजिक एवम आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मदन भण्डारी फाउण्डेशन कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘समृद्धि र यसका चुनौती’ विषयक...
खस्यौली । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले आज प्रदेशको अभिलेख सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विभिन्न बैठकमा दफावार छलफल गरेपछि पारित गरिएको समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले जानकारी दि...
दाङमा चार लाखभन्दा बढी बिरुवा रोपियो
दाङ । दाङमा यो वर्ष साढे चार लाख बिरुवा रोपिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाका तुलसीपुर, घोराही , लमही भालुवाङ र गढवाका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा चार लाख बिरुवा रोपेको हो । डिभिजन वन कार्यालय ...
नेपालगञ्ज । सिटिजन्स बैंक लिमिटेड नेपालगञ्ज शाखामा भएको नक्कली तथा कम तौलको सुन धितो काण्डमा बैंकका प्रबन्धकसहित सात जनासँग जनही रु २५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । उच्च अदालत तलसीपुर–नेपालगञ्जले सात जनाउपर जनही रु २५ लाखक...
रुपन्देही । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेशकै मातहतमा हुनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले आज बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले संविधानमै व्यवस्था भएका विषयमा ...
राँझा । नेपालगञ्जस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्रले प्रदान गर्ने सीपमूलक तालीमप्रति बेरोजगार युवाको आकर्षण देखिएको छ । केन्द्रबाट प्रदान हुने विभिन्न समयावधिका तालीममा यस क्षेत्रको बाँके, बर्दियालगायत टाढा–टाढाबा...
दाङ । जबजब झरी पर्छ र बबईमा बाढी आउँछ, दङ्गालीहरुलाई ५ वर्ष अगाडिको कहालिलाग्दो समय ताजा बनेर आउँछ । आकाशमा बादल देखेरै बबई किनारका बस्तीहरु डराउँछन् । विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते र त्यसको दुई वर्षपछि २०७४ साउन २९ र ३० गते आएक...
सीमापारि बजारको आकर्षण
नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको सीमापारि भारतीय रुपैडिहा बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड त्यहाका व्यापारीका लागि थेगीनसक्नु छ तर नेपालगञ्जका व्यापारीलाई ग्राहक कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । “नेपालगञ्जभन्दा रुपै...
बुटवल । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोले आज भेटवार्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा राजदूत साइगोले नेपाल र जापानबीचको निकै पुरानो मैत्रीपू...
दाङ । जिल्लाको अति दुर्गम गाउँपालिका राजपुरमा पशु विज्ञान अध्ययनका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको छ । सनवत यादवको घरमा पालिएका दुईवटा भैंसी दुई बर्षअघि विरामी भएर मृत्यु भयो । के रोगले गर्दा भैंसीको मृत्यु भयो ? थाहै ...
काठमाडौं । प्रदेश नं. ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले संसदमा बजेट पेश गरेका हुन् । ...
दाङ । दङ्गीशरण गाउँपालिकाले आइतबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । गाउँपालिकाले ७ वटै वडाबाट सिफारिस भई आएका आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदान खर्च गर्नेगरी आयोजना छनौट गरेको छ । ...
दाङ । सम्राट सिमेन्ट उद्योगको निर्माणाधीन नयाँ प्लान्ट भत्किएको छ । प्लान्ट भत्किएपछि ३ जना मजदुरको मृत्यु भएको छ भने ३ जना घाइते भएका छन् । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगको नयाँ प्लान्ट निर्माणको क्रममा ६ तलामा...
नयाँ कानुन र मेलमिलापका पक्षबारे सिक्दै १ सय बढी मेलमिलापकर्ता
दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताका लागि आयोजना गरिएको २ दिने अभिमुखिकरण तालिम सकिएको छ । मेलमिलाप कर्तालाई नयाँ कानुनका साथै मेलमिलापका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको तालिममा उ...
तुलसीपुर उपमहानगरले ल्यायो छोरीलाई प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ता
– १ वर्षमा ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने – स्मार्ट छोरी, विहेवारी बीस वर्ष पारि – टोल टोलमा योग, जीवनभरि सुख – &nbs...
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न शुरुवात गरेको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश संसदीय दलले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सा...
जेठ १९, २०७६, आइतबार
दाङ । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ६ मा आज बिहान एउटा ट्रेक्टर पल्टिँदा २१ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार घोराहीबाट मुर्कुटी सडकखण्डमा काम गर्ने कामदार लिएर बंगलाचुलीतर्फ जाँदै गरेको रा १ त १००६ न...